ရွာသားတို့ရေ တိုက်ဆိုင်မှု့ကအံသြစရာပါလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရွာသားတို့ရေ တိုက်ဆိုင်မှု့ကအံသြစရာပါလား
Posted by koyinmaung on Mar 15, 2012 in Copy/Paste | 23 comments
(တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဝမ်ကျားပေါင်က စီးပွားရေးတိုးတက်မှု စိတ်ချရအောင်နဲ့ လူထုအတွင်း မတည်မငြိမ်ဖြစ်မယ့် အန္တရာယ် ကို ရှောင်လွှဲနိုင်အောင် နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်နေပြီလို့ လာမယ့်နှစ် အနားမယူမီ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ အလေးအနက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေး ပြုပြောင်းလဲရေးမလုပ်ကြဘူးဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၃ဝ အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး အမြတ်ထွက်ခဲ့တာ တွေလည်း ဆုံရှုံးနိုင်တယ်လို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ ၃ နာရီကြာတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ နိုင်ငံရဲ့သာယာဝပြောမှုကို လူထုအကြား မျှတစွာဖြန့်ဝေဖို့နဲ့ တရုတ်ငွေလဲနှုံးကို နိုင်ငံတကာဈေးကွက်နဲ့အညီ နှုန်းရှင်ထားခွင့်ပြုရေးစတဲ့ စီးပွားရေး ပြုပြောင်းလဲဖို့ကိုပါ တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဝမ်ကျားပေါင်က တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။)ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုများအားကျနေပြီးလို့……..
အာဏာရှင်စနစ် ခေတ်မမှီတော.ဘူးလို.သိသွားပြီနဲ.တူတယ် ……..။မြန်မြန်ပြောင်းတာကောင်းပါတယ်
အဖေါ်ရတာပေါ. ၊ မဟုတ်ရင် ကန်.လန်.ကန်.လန်.နဲ. ဆရာလာလုပ်နေဦးမယ် ။
ကျေးဇူးပဲကိုရင်မောင်ရေ ……ဒါနဲ. မမယ်မရောကျမ္မာပါစ ဗျာ …။
ဟုတ်ကဲ့ ကျမ္မာပါရဲ့ဗျာ ခုလိုသတိတရမေးဖေါ်ရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကိုရင်မောင် တို့ က အဲဒီမှာ ဆိုရင် ၊ စကားမစပ်ဗျာ ။ ကလေး တစ်ယောက်ဘဲ ရှိတာပေါ့နော် ။
သိချင်လို့ မေးမိတာကို စိတ်မဆိုးပါနဲ့ နော် ။
ကိုပေရေ ၂၀၀၇ နှစ်မှရောက်သွားတာပါ ကျနော်မှာတော့သားသမီး၃ယောက်ရှိပါတယ်..
၂၀၁၂ ကမ္ဘာပျက် မယ် ဆိုတာ စစ်အာဏာရှင်တွေ အတွက် ကမ္ဘာပျက် မှာလို့ ဘဲ မှတ်လိုက်ပါပြီ။
ဒီသတင်း ကို ကြားရတာ ကိုယ့်တိုင်းပြည် အတွက်ပါ လုံခြုံစိတ်ဖြစ်သွားတယ်။
သတင်းထူး နဲ့ သတင်းဦးလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုရင်မောင် ရှင့်။
မ khin Latt ပြောတာ မှန်ပါစေ…၊
2012 … အာဏာရှင်တွေ ကမ္ဘာပျက် မဲ့ နှစ်လို့ ယူဆလိုက်ပါပြီ…၊
အရီးလတ်ပြောတဲ့အတိုင်း ၂၀၁၂ က အာဏာရှင်တွေ ကမ္ဘာပျက်မဲ့နေ့ဖြစ်ရင် အရမ်းကောင်းမှာပါ…
အရေခြုံ ရွက်ပုံးသီး လုပ်နေသူတွေကိုကော ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟင်င်င်….
ရေမြေဆက်စပ်နေတော့ တစ်နိုင်ငံဖြစ်တာ နောက်တစ်နိုင်ငံက သတိထားမိနေတာလည်း ပါမယ်ထင်ပါရဲ့။
ကဲ- နေရာတကာ နောက်ကျတယ်လို့ ပြောနိုင်သေးလား။
ကြည့်ရတာ စမ်းသပ်ခံများ ဖြစ်နေပြီလား။
အိုက်ဒါကြောင့် ပြောဒလာပေါ့ အိုဘားမားက
ဘီလိုက်ဘားမား တဲ့ ….
အမိမြန်မာပြည် အဒွန့်ရှည်ပါစေ …..
Obama: be like Burma | Global Post
Mar 5, 2012 – As the 2012 US presidential race ramps up, President Barack Obama is already presenting Burma, Southeast Asia’s pariah on the mend, as the …
Obama Says Authoritarian Regimes Should Follow Burma’s Example
Mar 2, 2012 – “We demonstrated that if countries like Burma travel down the road of democratic … Obama, who is seeking reelection in November presidential …
ဟုတ်ကဲ့။ ဟိုတလောကပဲဦးရွှေမန်းတရုတ်ပြည်သွားတာ တရုတ်အစိုးရက ကောင်းမွန်သောအကြံပေးလိုက် တယ်တဲ့။ သူတို့လိုချင်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီကို ဗဟိုဦးစီးစနစ်နဲ့ပေးလိုက်ပါလို့တဲ့။ အရပ်ကတို့ရေကြားဖူးကြရဲ့ လား။ ဗဟိုဦးစီးစနစ်ဒီမိုကရေစီတဲ့။ သူတို့လဲအဲလိုပြောင်းဖို့ကြံနေပုံရတယ်။ သေဖေါ်ညှိနေတာနဲ့တူတယ်။
That shows how Chinese party leaders are in touch with the grass root and how much they care for the country. Even China isacommunist country they still practicingademocratic means in managing affairs of the party through National congress and they are in the practice of applying collective leadership and we are hard to call Chinaadictatorship regime like that of our late SPDC. Even I am totally oppose china in its business attitude that exploit Myanmar’s rich natural resources I cannot help admiring its leadership and we have to commit that this is the type of attitude we should also nurture for the development of our country.
I mean there isacertain degree of freedom and democracy ( maybe very little )even in chinese communist party and Congress.
တရုတ်နဲ့ မြန်မာ ရေမြေချင်း နီးစပ်ပြီးတော့.. ကံတရားချင်း အဲလို နီးစပ်သယောင်တော့ ရှိတယ်။
အရေးအခင်း ဖြေရှင်းနည်းကလည်း တူတယ်လေ။
သူတို့ ပြောင်းဖို့ကြိုးစားနေတာ ကြာပါပြီ။
ပြည်ပ နဲ့ အလွှာစုံ ကဏ္ဍစုံ ဆက်ဆံရေးလုပ်နေတာ-
ကုလားထိုင်ကျောက်ချ အာဏာရှင်တွေကို ဖယ်ရှားတာ-
ုငြင်သာတဲ့ နိုင်ငံရေးစံနစ် တဆင့်စီကူးပြောင်းဘို့မှာ အခရာဖြစ်တဲ့
လူလတ်တန်းစား နဲ့ သူဌေးပေါက်စတွေ တိုးပွားအောင်လုပ်တာ-
နိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့ ငွေကြေးစံနစ်ကို တတ်နိုင်သမျှငြိမ်အောင်ထိန်းတာ-
ပြီးတော့ လစ်ရင် လစ်သလို ပြောင်းလဲရေး လေသံပစ်တာလဲ ပါတာပေါ့လေ..။
ဆင်းရဲ ချမ်းသာ၊ ပညာမဲ့ ပညာတတ် အလွန်ကွာခြားမှု့ကြီးမားတဲ့
တော်တော်နဲ့ (ဆယ်စုနှစ်သုံးလေးခုနဲ့) မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။
အတင်းဇွတ်လုပ်ရင် အပိုင်းနှစ်ဆယ်လောက် ကွဲသွားမှာလဲရှိသေး….။
တစ်ကမ္ဘာလုံးပြောင်းလဲနေတာကို အားကျနေပြီထင်တယ် ။
တရုတ်ကြီး သဘောထား ပြောင်းသလို ကြေးမုံလေးလည်း ကြောင်ကြီးအပေါ် သဘောထား ပြောင်းလာရင် ကောင်းမယ်ဗျာ… အခုတော့
ထိုင်းJasmineဆန်ကို ရေခန်းချက် စားတာကွ…။
အံ့သြစရာသတင်းပါ..ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ ကျုပ်တို့အစိုးရ